Nge-16 ka-Epreli, iimpahla zikaPinyang zafumana iodolo yamaqhekeza angama-3000, awathunyelwa ngempumelelo ngomhla wama-29. Ubungakanani beli bhetshi yee-odolo buncinci kakhulu, kwaye kufuneka imibala esixhenxe. Kuthatha iiyure ezili-12 ngombala omnye ukudaya kunye neentsuku ezintathu zemibala esixhenxe. Ikwafuna ukugqiba i-var ...
Ii-odolo zambini okanye zintathu kuphela iimpahla ezinokwamkelwa Ngenxa yokungena kwe-Alibaba's "rhinoceros fektri", uguquko olukrelekrele lweshishini lokuvelisa iimpahla luye lwaba sisihloko esishushu kwishishini kwakhona. Ngapha koko, ukusukela oko ifashoni yempahla yophawu yamanye amazwe ...
Ukuthatha iimfuno zolutsha njengolwalathiso lophando lwemveliso kunye nophuhliso lokubamba amaqela amancinci abathengi
Okthobha 6, 2020, ngentsimbi yeshumi kusasa. Ukuthatha amalaphu njengokugxila kuyilo lwemveliso, ndwendwela ulwazi olufanelekileyo kunye neempawu zamalaphu. Emva kwemini, isebe lolawulo lahlela umxholo ofanelekileyo kwaye labiza abasebenzi abafanelekileyo ukuze bachaze ...
Ngo-Okthobha u-2020, kwagqitywa ekubeni livumele iqela labo lithathe inxaxheba ekufundweni kwetekhnoloji entsha
Ngo-Okthobha u-2020, ukuze siwugcine ngcono umxholo kunye "nokujolisa ebantwini", siya kubonelela abathengi bethu ngeenkonzo ezisemgangathweni. Vumela abathengi ukuba bakhethe ngakumbi kwaye bagqibe kwelokuba iqela labo lithathe inxaxheba ekufundweni kwetekhnoloji entsha. Baza kuqala ukufunda nge-6 ka-Okthobha, ke ...
Ukulungiselela ukuphumeza ngcono ulawulo olungqongqo, ukuphucula izakhono zokusebenza, kunye nokwandisa izimvo zokusebenza, nge-15 ka-Matshi 2020, abasebenzi abasebenza phambili kwimveliso baququzelelwa ukuqhuba uqeqesho olulandelayo lweveki. Umxholo ophambili kolu phononongo ubandakanya iinxalenye ezimbini: amandla okusebenza ...